Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Grand Canyon Jewels: El Tovar Hotel sy Hopi Gift Shop
Hotels & Resorts • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Enina ambin'ny folo amby zato taona lasa izay, nisy firavaka ara-javakanto roa nisokatra tao amin'ny Valan-javaboarin'i Grand Canyon: ny trano fandraisam-bahiny El Tovar misy efitra 95 sy ny fivarotana fanomezana Hopi House. Samy nahitana taratry ny fahitana mialoha sy ny maha-mpandraharaha an'i Frederick Henry Harvey ny orinasany izay ahitana trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny, fiara fisakafoana amin'ny lalamby, fivarotana fanomezana, ary fivarotana gazety.
Ny fiaraha-miasany amin'ny Atchison, Topeka ary Sante Fe Railway dia nampiditra mpizahatany vaovao maro ho any amin'ny Amerika Atsimo Andrefana amin'ny alàlan'ny fanaovana fitsangatsanganana amin'ny lalamby sy fisakafoanana ho an'ny fialamboly sy fialamboly. Nanangona ohatra momba ny harona vazimba teratany, vakana, saribakoly kachina, tanimanga ary lamba ny Orinasa Fred Harvey, tamin'ny fampiasana mpanakanto teratany-Amerikana maro. Harvey dia fantatra amin'ny anarana hoe "Sivilizasionan'ny Tandrefana".
Ela be talohan'ny naneken'ny Kongresy Amerikana ny Grand Canyon National Park Tamin'ny 1919, tonga tamin'ny alalan'ny kaotin-tsambo ireo mpizahatany voalohany indrindra ary nipetraka nandritra ny alina tao anaty tranolay, trano kely, na hotely ara-barotra taloha. Na izany aza, rehefa nanokatra spur saika mivantana mankany amin'ny Rim Atsimon'ny Grand Canyon ny Railway Atchison, Topeka ary Sante Fe, dia niteraka tsy fahampian'ny trano fonenana sahaza izany. Tamin'ny 1902, ny Sante Fe Railway dia nanangana ny El Tovar, trano fandraisam-bahiny efatra misy rihana voalohany novolavolain'i Charles Whittlesey, architect Chicago izay manana efitrano efa ho zato. Ny trano fandraisam-bahiny dia mitentina $ 250,000 mba hanorenana ary izy no hotely tsara tarehy indrindra any andrefan'ny Reniranon'i Mississippi. Nantsoina hoe "El Tovar" ho fanomezam-boninahitra an'i Pedro de Tovar avy amin'ny Expedition Coronado. Na dia eo aza ny endri-javatra ambanivohitra, ny hotely dia nahitana mpamokatra arintany izay mampitondra jiro elektrika, hafanana entona, rano mandeha mafana sy mangatsiaka ary fantson-drano anatiny. Kanefa, satria tsy nisy efitra fandroana manokana ireo efitra fandraisam-bahiny, dia nampiasa efitra fandroana ho an’ny besinimaro isaky ny rihana efatra ny vahiny.
Ny trano fandraisam-bahiny ihany koa dia nanana trano fonenana mba hambolena voankazo sy legioma vaovao, trano akoho ary andiana ronono mba hanomezana ronono vaovao. Ny endri-javatra hafa dia misy toeram-pisakafoanana, solarium, zaridaina ambony tafo, efitrano billiard, efitrano zavakanto sy mozika ary serivisy telegrafy Western Union ao amin'ny lobby.
Ny hotely vaovao dia naorina talohan'ny nahatongavan'ny Grand Canyon ho valan-javaboary federaly arovana taorian'ny fitsidihan'ny filoha Theodore Roosevelt tamin'ny 1903 ny Canyon. Roosevelt dia nilaza hoe: “Te hangataka anareo aho mba hanao zavatra iray mifandray amin’izany ho tombontsoanareo manokana sy ho an’ny tombontsoan’ny firenena — mba hitazonana ity zava-mahatalanjona lehibe momba ny zavaboary ity ho toy izao… na inona na inona, tsy trano bongo fahavaratra, trano fandraisam-bahiny na zavatra hafa, mba handoto ny fahalehibeazana mahafinaritra, ny fahamboniana, ny hatsaran-tarehy sy ny hakanton'ny Canyon. Avelao ho azy. Tsy afaka manatsara izany ianao.”
Ny trano fisakafoanana Fred Harvey dia naorina saika isaky ny 100 kilaometatra manamorona ny lalamby Sante Fe mamakivaky an'i Kansas, Colorado, Texas, Oklahoma, New Mexico ary California. Izy dia niasa tao amin'ny trano fisakafoanana sy hotely niaraka tamin'ny "Harvey Girls", tovovavy nokaramaina manerana an'i Etazonia miaraka amin'ny "toetra tsara fitondran-tena, fara fahakeliny, fianarana kilasy fahavalo, fitondran-tena tsara, kabary mazava ary endrika tsara tarehy." Maro tamin’izy ireo tatỳ aoriana no nanambady mpiompy sy mpiompy omby, ary nomena anarana hoe “Fred” na “Harvey” ny zanany. Hoy ilay mpanao hatsikana Will Rogers momba an’i Fred Harvey: “Nitazona ny tandrefana tamin’ny sakafo sy ny vady izy.”
Ny El Tovar dia napetraka tao amin'ny rejisitry ny toerana manan-tantara tamin'ny 6 septambra 1974. Nambara ho marika nasionaly manan-tantara izy io tamin'ny 28 mey 1987 ary mpikambana ao amin'ny Hotely manan-tantara ao Amerika nanomboka tamin'ny 2012. Nampiantrano mpanazava toa an'i Albert ny Hotely. Einstein, Zane Grey, Filoha Bill Clinton, Paul McCartney, ankoatra ny maro hafa.
Ny Hopi House Gift Shop (1905) dia naorina mba hifangaro amin'ny tontolo manodidina ary modely amin'ny trano fonenana Hopi pueblo izay nampiasa fitaovana voajanahary eo an-toerana toy ny fasika sy zenevrie tamin'ny fananganana azy ireo. Raha nikarakara tsiro avo lenta i El Tovar, ny Hopi House dia naneho fahalianana vao misondrotra amin'ny zavakanto sy asa tanana Indiana Atsimo Andrefana namporisihan'ny orinasa Fred Harvey sy ny Railway Sante Fe.
Hopi House dia noforonin'ny mpanao mari-trano Mary Jane Elizabeth Colter nanomboka ny fiaraha-miasa amin'ny Fred Harvey Company sy ny National Park Service izay naharitra 40 taona mahery. Namboarina sy naorina ho toerana hivarotana ny zavakanto karana izy io. Nangataka ny fanampian'ny mpanakanto Hopi avy amin'ny tanàna akaiky izy mba hanampy amin'ny fananganana ilay rafitra. Colter dia niantoka fa ny atitany dia taratry ny tranoben'ny Pueblo eo an-toerana. Ny varavarankely kely sy ny valindrihana ambany dia manamaivana ny tara-masoandro any an-tany efitra ary manome fahatsapana mangatsiatsiaka sy milamina ao anatiny. Ny trano dia misy rindrina rindrina, fatana an-jorony, rindrina adobe, sary hosodoko fasika Hopi ary alitara fombafomba. Vita amin'ny siny vita amin'ny tanimanga vaky nafangaro sy nopetahana ny setroka.
Rehefa nisokatra ny trano, ny rihana faharoa dia nampiseho fitambarana bodofotsy Navajo tranainy, izay nahazo ny loka lehibe tamin’ny Foara Maneran-tany St. Louis tamin’ny 1904. Ity fampirantiana ity dia nanjary ny Famoriana Zavakanto Fine Fred Harvey, izay nahitana karazan-javakanto Amerikana 5,000 teo ho eo. Ny fanangonana Harvey dia nitety an'i Etazonia, anisan'izany ireo toerana malaza toa ny Field Museum any Chicago sy ny Carnegie Museum any Pittsburgh, ary koa ny toerana iraisam-pirenena toa ny Berlin Museum.
Ny Hopi House, taloha sy ankehitriny, dia manolotra karazan-javakanto sy asa tanana maro isan-karazany amidy: tanimanga sy sary sokitra vita amin'ny hazo nalamina teo amin'ny kaontera voarakotra bodofotsy sy karipetra vita amin'ny tanana Navajo, harona nahantona tamin'ny hazo voapoizina, saribakoly kachina, saron-tava fombafomba, ary ny sary sokitra vita amin'ny hazo nohazavain'ny hazavana mirefodrefotra amin'ny varavarankely kelin'ilay trano. Mandravaka ny rindrin'ny tohatra ny sary an-drindrina hopi, ary anisan'ny efitrano misy toerana masina ny zavakanto ara-pivavahana.
Ny orinasa Fred Harvey dia nanasa ireo mpanao asa tanana Hopi mba hampiseho ny fomba nanamboarany firavaka, vilany, bodofotsy ary zavatra hafa izay hamidy avy eo. Ho takalon'izany dia nahazo karama sy trano fialofana tao amin'ny Hopi House izy ireo, saingy tsy nanana tompon'ny Hopi House mihitsy izy ireo ary zara raha nahazo nivarotra ny entany mivantana tamin'ny mpizaha tany. Tamin'ny faramparan'ireo taona 1920, ny orinasa Fred Harvey dia nanomboka namela Indiana Hopi sasany ho tompon'andraikitra amin'ny orinasa. Nokaramaina hanao fampisehoana fanenomana bodofotsy i Porter Timeche fa tena tia niresaka tamin'ny mpitsidika izy ka zara raha nahavita bodofotsy hamidy, tamin'izay fotoana izay dia nomena asa ho mpivarotra tao amin'ny fivarotana fanomezana Hopi House. Taty aoriana izy dia mpividy ny fifanarahana Fred Harvey tao amin'ny Grand Canyon. Fred Kabotie, ilay mpanakanto malaza nandoko ny sary hosodoko Hopi Snake Legend tao amin'ny Desert View Watchtower, dia nitantana ny fivarotana fanomezana tao amin'ny Hopi House tamin'ny tapaky ny taona 1930.
Avy amin'ny lazan'ny Hopi House dia maro ny mpitsidika no mety hihevitra fa ny Hopi no hany foko teratany ao amin'ny Grand Canyon, saingy lavitra ny fahamarinana izany. Amin'izao fotoana izao, foko 12 samy hafa no fantatra fa manana fifandraisana ara-kolontsaina amin'ny Canyon, ary ny National Park Service dia niasa mba hanomezana izay ilain'ireo vondrona hafa ireo ihany koa.
Ny Trano Hopi dia voatendry ho mari-pamantarana manan-tantara nasionaly tamin'ny 1987. Nandritra ny fanavaozana tanteraka tamin'ny 1995, ireo mpanolo-tsaina Hopi dia nandray anjara tamin'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny ary nanampy mba hahazoana antoka fa tsy nisy niova ny singa ara-javakanto na endrika tany am-boalohany. Hopi House sy ny Lookout Studio dia rafitra mandray anjara lehibe ao amin'ny Grand Canyon Village National Historic Landmark District.
PIC NY STANLEY